आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौं – Sidha Patra
आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौं
संजय रिजाल मंगलबार, चैत्र ११, २०७६
कोरोना भाइरसबाट अहिले संसारभर लाखौ मानिस संक्रमित भएका छन् । हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ । यो भाइरस विरालो, चमेरो, उटमा समेत प्रवेश गरेको बताइदै आएको छ । चिनको हुवेइ प्रान्तको वुहान शहरबाट यो भाइरस फैलिएको बताइन्छ । वुहान शहरको सामुन्द्रिक खानाबाट यो भाइरस फैलिने क्रम शुरुवात भएको आंशका गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना जनाबरबाट मानिसमा फैलिएको फैलिन्छ । यो भाइरस यस अघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यसकारण यसको बारेमा धेरै जानकारी अहिलेसम्म उपलव्ध छैन । महाशक्ति राष्ट्रको दौडमा अगाडि बढेको चिनले यो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिए पनि अन्य राष्ट्रहरुलाई यो भाइरसले त्राही त्राही पारिरहेको छ ।
नेपालमा यो भाइरस अहिलेसम्म चिनबाट आएका एक जना व्यक्तिमा देखिए पनि उनको उपचार भैसकेको छ र उनी निको भैसके । गत सोमवार फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग हस्पिटलमा राखिएको छ । उनी फ्रान्सबाट चैत ४ गते नेपाल फर्किएको र होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्थामा रुगाखोकी लागि परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ भाइरस पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ । विदेशमा रहेकी ती युवती बाहेक संक्रमित नरहेको नेपालमा यो भाइरसले किन यति धेरै जोखिम बढाएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ ।
यो रोग नेपालमा भित्रियो भने यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ । विकसित युरोपेली देश तथा अमेरिका समेत यो भाइरसबाट आत्तिएबाटै हामीले अनुमान गर्न सक्छौ कोरोना नेपाल भित्रिएपछि हाम्रो अवस्था के हुने हो ।
हाम्रो क्षमताको बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अहिलेसम्म यो भाइरस हाम्रो शरीरमा लागे नलागेको जाँच्ने एउटा मात्र प्रयोगशाला काठमाण्डौमा रहेको छ । त्यो प्रयोगशालामा नमुना पठाएको करिव २४ घण्टापछि मात्र त्यसको रिपोर्ट आउने अवस्था छ । एउटा संक्रमित पहिचान गर्न त यो अवस्था छ भने संक्रमण भइसकेपछि आइसोलेसन गरेर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रयाप्त सामाग्री पनि हामीसँग तयारी अवस्थामा छैन । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षित भएर मात्र यो भाइरसबाट हुने संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म त्यसको भरपर्दो जोहो भएको देखिदैन ।चिकित्सकको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलव्ध नभए चिकित्सकलाई पनि विरामीको उपचार गर्न त्यति सहज छैन । अहिले पनि कोरोना संक्रमणको आशंकामा अस्पताल गएका विरामीहरुबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत तर्सित हुने गरेको भन्न समाचारहरु समेत प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
प्यूठान जस्तो दुर्गम जिल्लाहरुमा विशेषज्ञ डाक्टर पाउनु मुस्किलको कुरा हो । सामान्य अवस्थामा समेत विरामीको लोड धान्न हम्मे हम्मे परेका चिकित्सकहरुले कसरी सम्भावित विपत्तिको सामना गरेर कसरी उपचार गर्न सक्छन् ? अरु रोगहरुको उपचार गर्नु जति सहज छैन कोरोना भाइरसको उपचार गर्न । किनभने यसको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर निक्कै तिव्र छ । हावाको माध्यमबाट समेत यो भाइरस सर्ने भएकोले भिडभाडमा नजान सरकार तथा चिकित्सकहरुले सल्लाह दिइरहेका छन् ।
प्यूठान जिल्लामा समेत यही आइतवारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, व्यापार व्यवसाय बन्द गरिएको छ । नेपाल सरकारको निर्देशन तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट यस्तो निर्णय गरिएको थियो । तर यस्ता बन्दहरुमा नागरिकहरुले त्यति बढि चासो दिएको पाइदैन । समस्या नपर्दै हामीले सतर्कता नअपनाउने हाम्रो पहिलेदेखिकै वानी हो । यस अघि २०७२ मा गएको भूकम्पको बेला हामी जसरी सचेत र सजग भएका थियौं । अहिले अझै त्यो अवस्था देख्न सकिएको छैन । भूकम्प भन्दा पनि कडा खालको विपत्ति हाम्रो सामुन्ने आइरहेको छ । हामीले त्यसको मुकावला गर्नका लागि गरेका यी तयारीहरु हुन् । जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । अहिले सरकारले खुल्ला रहेको भारतीय सीमा नाका समेत बन्द गरेको छ । त्यस्तै चिनतर्फको नाका पनि बन्द गरिएको छ । हाम्रो एकमात्र विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि विदेशबाट यात्रु आउन नपाउने गरी वन्द गरिएको छ ।
सडक यातायातलाई पनि नियन्त्रीत बनाइएको छ । लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । भिडभाड तथा भेला हुन समेत रोक लगाइएको छ । यसले नागरिकलाई केही समस्या परेको होला । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको रहर होइन बाध्यता हो । अन्य विपद्मा जस्तो यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि पनि पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो पूर्व तयारी सरकार एक्लैले गरेर मात्र पर्याप्त होइन त्यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । विपद्को जोखिम कम गर्न सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकहरु सचेत हुनु नै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्यूठानबाट विशेष गरी भारतमा रोजगारीको लागि जानेको संख्या अत्यधिक छ । बिशेष गरी घरेलु कामदार देखि कृषि, मजदुर, लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा प्यूठानीहरु भारतमा काम गर्ने गर्दछन् । भारतमा कोरोना भाइरसको त्रास बढेपछि ती क्षेत्रबाट अन्य जिल्ला जस्तै प्यूठानमा पनि घर फर्कनेको संख्या बढिरहेको छ । गत आइतवार सम्म पनि जिल्ला भित्रिने नाकामा ज्वरो परीक्षण गर्ने तथा सामान्य परामर्शको हेल्प डेस्क समेत सञ्चालन नहुँदा भारतबाट नेपाल फर्कनेहरुको परिवार कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
प्यूठान जिल्लाको कोरोना भाइरसको पूर्व तयारी केही ढिलो भएपनि सोमवारदेखि दरभानमा जिल्लाका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा ज्वरो जाच गर्ने तथा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले हरेक वडामा भारत तथा विदेशबाट नेपाल भित्रिनेको लगत राख्ने काम थालेका छन् । यो काम सँगै नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्कनलेलाई कम्तीमा १४ दिन सेल्फ क्वारेण्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको छ । तर त्यो आग्रहको कार्यान्वयन भएको पाइदैन । हामी विरामी परेर ओछ्यानमा थला नपर्दासम्म विरामी हुने अनुभूति पनि गर्दैनौं । लामो समय विदेश पुगेर आएकाहरु अहिले निर्वाध गाउँमा आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न व्यस्त भएको समाचारहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस्ता भेटघाटमा हाम्रो संस्कार अनुसार ढोगभेट समेत गर्ने चलन छ । यस्ता चलन समेत मेटिएका छैनन् । जसले गर्दा हाम्रा गाउँघरमा कोरोनाको जोखिम अझ बढेको छ ।
यस्ता जोखिमलाई कम गर्न स्थानीय तहहरुले अलि बढि चनाखो भएर विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जिल्ला प्रवेशको नाकामा हेल्प डेस्क राखेपछि त त्यहाँबाट भएको परामर्शले पनि केही काम गर्न सक्छ । तर त्यो हेल्पडेस्क राख्न भन्दा पहिले नै आइसकेकाको लागि सेल्प क्वारेन्टाइनमा राख्न सचेतना अभियान अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सबभन्दा नजिकको सरकार भएको कारण पनि यस किसिमको विपत्तिको सामना गर्न स्थानीय तहहरु यसको फैलावटलाई रोक्न अग्रसर हुनुपर्दछ । यसको संक्रमण नहुँदै हो हामीले यसको विरुद्ध काम गर्ने भनेको । यदि संक्रमण भइहाल्यो भने हाम्रो अवस्था कावु बाहिरको हुनसक्छ । अहिले अपनाएको थोरै सावधानील मात्र पनि भविष्यमा कोरोनाको त्रासदीबाट मुक्त हुने बाटो हामीलाई मिल्छ ।
अहिले बडो संयमित हुने अवस्था हो । सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने यो भाइरस सम्वन्धी फैलाइएका अफवाहले पनि यो भाइरसको आतंक सिर्जना गरेको छ । आधिकारीक निकायबाट पुष्टि नभएका गलत तथ्यांक दिएर समाजमा विभिन्न अफवाह फैलाउनेहरु पनि छन् । यस्ता माध्यमबाट आएका सूचनाहरुलाई हामीले विश्वास गर्नुहुँदैन ।
कोरोना भाइरसको फैलावट नरोकीदा सम्म हामी सुरक्षितसाथ घरमै बस्नुपर्छ । संक्रमित ठाउँबाट आएका व्यक्ति र उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएकालाई कम्तिमा १४ दिन अलग्गै बस्न दिनुपर्छ । यसका लागि समाजका अगुवा, स्थानीय जनप्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा अगाडी सर्नुपर्छ । कहिं कसैमा कोभिड–१९ को शंका लागेमा वा लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरी सुरक्षितसाथ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाई हाल्नुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको औषधिउपचार तथा खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । गाउँघरमा क्वारेन्टाइन बस्नको लागि गाउँमा घरहरु पर्याप्त नहुन सक्छन् । त्यसको लागि कसैको घर तथा सार्वजनिक घरहरु छन् भने पनि तीनलाई प्रयोगमा ल्याउने योजना स्थानीय जनप्रतिनिधहरुले गर्नुपर्दछ ।
आज हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं । यो असामान्य अवस्थासँग जुध्नको लागि तपाई हामी सबै नेपालीको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ । यो महामारी प्रकोपको सामना गर्न पहिलो साथ र सहयोग भनेको घरपरिवारदेखि समुदाय, समाज हुँदै वडा गाउँ जिल्ला प्रदेश हुँदै राष्ट्र होइन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत व्यापक एकता आवश्यक छ । यसकारण आजको आवश्यकता भनेको हाम्रो सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई तुरुन्त बन्द गरेर घरमै सुरक्षित बस्नु हो । यसलाई हामी नागरिकले खेलाचीको रुपमा नलिऔं । अहिले कोरोना भाइरस फैलिएको इटालीमा पनि केही हप्ता अगाडि यस्तै अवस्था थियो । रोग प्रवेश नियन्त्रणका लागि भरपर्दो उपाय तथा प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना नभएको कारण अहिले इटालीमा यो समस्याले उग्र रुप लिइरहेको छ । त्यहाँको अवस्था नाजुक रहेको छ ।
यसकारण हामीले यो भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि हामी व्यक्तिगत रुपमै तयारी थाल्नुपर्छ । देशविदेशबाट घर फर्किरहेकाहरुलाई सरसफाई तथा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु अनिवार्य छ । क्षणिक माया दर्शाउने भावमा परिवारमा नै सबैभन्दा पहिले रोग स¥यो भने अवस्था के हुन्छ । त्यसबाट बेलैमा सचेत हुनुपर्दछ । हामीले गर्ने भनेको यो भाइरसलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न नै नदिनु हो । त्यसको लागि सकेसम्म अत्यावश्यक काम बाहेक भिडभाडमा नजाने, भिडभाडमा जादा मास्क लगाउने, एक आपसमा कुरा गर्दा नजिक भएर कुरा नगर्ने गरेमा यो भाइरसको संक्रमण जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यसकारण पछि पछुताउनु भन्दा सहि समयमै सहि निर्णय गरेर यो महामारीको प्रकोपबाट आपूm बाँचौ र अरुलाई पनि बचाऔं ।
रिजाल प्युठानको माण्डबि राष्ट्रीय साप्ताहिकका प्रकाशक/ सम्पादक हुनुहुन्छ।